Nei Gokai - Shanghai Gokai Viwanda Co., Ltd.
Shanghai Gokai Viwanda Co., LTD.
Nyanzvi yekugadzira bhodhi uye pepa
Shanghai Gokai Viwanda Co., Ltd.inotsvaga mukutsvaga, kusimudzira, kugadzira PVC furo bhodhi, Acrylic Sheet kunyanya. Iyo Kambani yakavambwa muna2009, kune 2 mafekitori, gumi ekugadzira mitsara, dzimbahwe riri muShanghai, China. Isu takazivisa epamberi yekugadzira michina uye yekugadzirisa tekinoroji, zvakare yepasirese-inotungamira michina uye yakapfuma ruzivo neiyi maitiro Zvese izvi zvinogonesa Gokai kuburitsa PVC furo bhodhi, acrylic jira, ine mhando yepamusoro. Inonyatsoenderana nezvinodiwa pamusika.
Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kutumirwa kune, seArgentina, Brazil, Canada, Nigeria, Mexico, Saudi Arabia, UAE, UK, USA, Malaysia, Thailand, Vietnam, Spain, Romania, Algeria kutenderera pasirese. Isu tiri zvakare SGS Yakaongororwa Mutengesi. Uye isu tinopfuura CE certification. Isu tinotarisa pahunhu kuti isu tinotora yakasimba mhando yekuongorora kudzora nzira kuitira kuve nechokwadi chekuvimbika kwechigadzirwa mhando.
Gokai wePVC Furo Bhodhi:
Zvakare yakatumidzwa zita rekuti PVC furo jira, isu tinopa Kushambadzira PVC furo bhodhi, Zvivakwa zvePVC furo bhodhi, Fenicha PVC furo bhodhi. Ukobvu 1mm kusvika 30mm. Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mufanicha, kushambadza, zvekuvaka, kushongedza uye kunyorera maindasitiri uye mimwe minda.
Gokai weAcrylic Sheet:
Zvakare rakatumidzwa zita rekuti plexiglass sheet. Isu tinopa Cast acrylic sheet uye Extrude acrylic sheet, Acrylic Mirror jira, Acrylic Mwenje Inotungamira Sheet, Acrylic jira rinonyanya kushandiswa mukushambadzira, kuvhenekesa, kuvaka indasitiri, kuveza, kushongedza uye zvakare mutabhu, yekugezera. Ukobvu 1-500mm. Yepamberi yekugadzira maitiro inoona acrylic sheet ine kuomarara kwakanakisa, simba uye yepamusoro chemakemikari kuramba.
Tine gumi yekugadzira mitsara, 1 * 20GP anenge 10days kusvika apedza, 1 * 40GP anenge 15days kusvika apedza.
Tine vashandi mazana maviri, vanopfuura makumi maviri mainjiniya mainjiniya uye makumi masere muzana vane degree reBachelor.
Raw zvinhu i100% mhandara.
Export pasuru uye Nyanzvi cabinet.
PVC furo bhodhi shandisa epurasitiki bhegi nemakona varindi, kana bhokisi remabhokisi uye huni pallet.
Bhegi repurasitiki nevarindi vemakona
Export huni nhovo
Kuteedzera chigadziko chePlatic bag
Kuteedzera mudziyo weKatoni bhokisi
Kuisa mudziyo wehuni pallet
Acrylic jira shandisa PE firimu kana kraft bepa, ndokuzoshandisa huni pallet.
Mativi maviri PE firimu kana kraft bepa
Wood nhovo yepakeji
Yakagadziriswa saizi uye ukobvu uye ruvara zviripo. Tikugashirei kugovana pfungwa dzenyu nesu, ngatishandei pamwechete kuti hupenyu huwedzere kugadzira.
GOKAI TIMA Uye CORPORATE TSIKA
Makambani anoteerera kutendeseka kwedombo repakona, hunhu hwekupona, sainzi uye hunyanzvi hunyanzvi sekufambisa simba, kutsvaga kugona, kunogadzira hunoshamisa hunhu. Isu tinoda kushandira pamwe nemoyo wese nevatengi kumba uye kunze kwenyika kuti vafambirane nenguva uye vagadzire kubwinya pamwechete.
Gokai anogara achitevedzera musimboti, vanhu-vakatungamira, kutendeka manejimendi, mhando yepamusoro, mukurumbira wepamberi.
Kugadziridza ndiko kukosha kweGokai tsika.
Innovation inotungamira mukusimudzira, iyo inotungamira mukuwedzera simba, Zvese zvinotangira kubva mukuvandudza.
Basa rinoita kuti munhu ave nekutsungirira.
Gokai ane simba rakasimba rebasa uye chinangwa chevatengi nenharaunda.
Yakagara iri iyo yekutyaira kusimudzira kwaGokai.
Kubatana ndiko kunobva budiriro.
Shandai pamwechete kugadzira yekukunda-kuhwina mamiriro anoonekwa sechinangwa chakakosha kwazvo mukusimudzirwa kwemakambani.
Nokuita zvinobudirira kuita kutendeka kushandira pamwe,
GOKAI REMAITI UYE KUONA
Mutengi anoshanyira Gokai Exhibition
Pvc furo bhodhi reodha: 5 Nyeredzi
Acrylic pepa reodha: 5 Nyeredzi